जीवनशैलीले दर्साउँछ बुद्धप्रतिको सम्मान
बौद्ध धर्म यति व्यापक र चर्चित हुनुका पछाडि बुद्धले प्रतिपादन गरेकोे ज्ञान नै मुख्य कारण हो । तर, सिद्धार्थ गौतमजस्तै बुद्धत्व प्राप्त गरेका अन्य ऋषिमुनिहरू किन यति चर्चित भएनन् भन्ने कोणबाट हेर्दा बुद्धको फैलावटमा ज्ञान मात्रै कारण नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
बुद्धको देहावसानपश्चात् जैन धर्मको प्रभाव बढी थियो । बुद्धभन्दा महावीरलाई पछ्याउने मानिस धेरै थिए । चाणक्यका चर्चित शिष्य अर्थात् भारत वर्षका चर्चित राजा चन्द्रगुप्त राजाकाज छाडेर जैन साधु भएका थिए । उक्त समयमा बुद्ध ज्ञानको तीव्र प्रभाव निर्माण भइसकेको थियो भने उनी बौद्ध भिक्षु बन्न सक्थे ।
संसारमा सबैभन्दा छिटो फैलिएको धर्म इस्लाम हो । समयका आधारमा हेर्ने हो भने इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्रब मोहमद सबैभन्दा छोटो कालखण्डमा ठूलो जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने धार्मिक गुरु हुन् । अरु धर्मको तुलनामा कान्छो धर्म मानिएको इस्लाम आज संसारका प्रमुख धर्ममध्ये एक भइसकेको छ । करिब १५ सय वर्षको समयमा यति व्यापक भएको इस्लाम अबको ५० वर्षमा जनसंख्याको आधारमा संसारकै नम्बर वान धर्म बन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
बौद्धधर्म किन व्यापक भयो ?
सिद्धार्थ गौतम प्रतिष्ठित राजकुमार थिए । उनको ज्ञानले अर्काे राजपरिवार वा राजालाई अपिल गर्न सजिलो भयो । बुद्धकै जीवनकालमा तत्कालीन कोशल नरेश प्रशेनजित बुद्धका अनुयायी भए । तत्कालीन मगध साम्राज्यका सम्राट बिम्बिसार त बुद्धका अनुयायी मात्र बनेनन्, उनले त बौद्ध संघलाई बिस्तारित हुने आधारसम्म प्रदान गरे । यसरी राजाहरु नै बुद्धको अनुयायी भएपछि प्रजासम्म बौद्ध धर्म सजिलै पुग्यो ।
तत्कालीन भारत वर्षका सम्पूर्ण राजाहरु तरबारको आधारमा शक्तिशाली थिए । तर, ती राजालाई पनि ब्राम्हणहरुले सम्पूर्ण रुपमा प्रभावमा राख्ने गर्थे । राज्यको सम्पूर्ण नीति निर्माणको जिम्मा ब्राम्हणहरुको हातमै हुन्थ्यो । यस्ता ब्राम्हणलाई बुद्धले ज्ञान बलमा पराजित गरिदिए । बुद्धले कैयौं ब्राम्हणसँग ज्ञानको विषयमा बहस गरेका थिए । बहसमा पराजित भएपछि हजारौं हजार शिष्य भएका ब्राम्हण गुरुहरु पनि बुद्धका अनुयायी बन्न पुगे । कतिसम्म भने बुद्धसँग साथीका रुपमा साधना गर्ने पञ्चभद्र वर्गीय ब्राम्हणहरु पनि पछि बुद्धका शिष्य बनेका थिए । यसरी शासकहरु अर्थात् तरबारको शक्ति र ब्राम्हणहरु अर्थात ज्ञानको शक्ति बुद्धको संगतमा आएपछि उनको सन्देश फैलन निकै सजिलो भयो ।
बुद्धको ज्ञानलाई विश्वविख्यात बनाउने मुख्य श्रेय अशोक सम्राटलाई नै जान्छ । इसापूर्व २६२ देखि २६१ मा भएको कलिंगको युद्धका क्रममा बगेको रगतको खोलाले अशोक सम्राटलाई बौद्ध धर्मको अनुयायी बन्ने प्रेरणा दियो । मौर्य सामराज्यका चक्रवर्ती सम्राट राजकाज छाडेर बौद्ध धर्मको प्रचारमा निक्लिए । आज बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हो भन्ने ऐतिहासिक आधार तिनै अशोक सम्राटले लुम्बिनीमा राख्न लगाएको ढुंगे स्तम्भ नै हो । उनले ‘यहाँ बुद्ध जन्मिएका थिए’ भनेर स्तम्भमा लेख्न लगाएका कारणले नै हामीले बुद्ध जन्मस्थलको प्रामाणिक आधार प्राप्त गरेका छौं ।
अशोक सम्राट बौद्ध धर्मको ‘मिसनरी’ नै बनेर विभिन्न देश डुले । उनी बुद्ध धर्मको प्रचार गर्दै काठमाडौंसमेत आएको इतिहास छ । यसरी उक्त युगको चक्रवर्ती सम्राटले नै सम्पूर्ण जीवन सुम्पिएर प्रचार गरेपछि बौद्ध धर्म सहजै फैलियो ।
हामीले स्कुले पाठ्यपुस्तकदेखि नै राजकुमार सिद्धार्थले वैशाखे पूर्णिमाको दिन बोधगयाको पिपलको रुखमुनि ज्ञान प्राप्त गरे भन्ने पढ्दै र सुन्दै आएका छौं । यो ज्ञान पाएको भनेको के हो ? हामीले शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म ज्ञान र सिप हासिल गर्नका लागि पढ्छौं । तर, बुद्धले आँखा चिम्लिएर पिपलको बोटमुनि बसेर ज्ञान पाए भनिएको छ ? यो भनेको के हो ? कसैसँग नसिकी वा नपढी सिद्धार्थ गौतमको मस्तिष्कमा कसरी ज्ञान अवतरित भयो ? यो विषयमा सामान्यतः छलफल नै गरिँदैन । जसले गर्दा हामी आ रुपमा बुद्धले ज्ञान पाए त भन्छौं । तर, उक्त ज्ञान पाएको भनिएको के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सक्दैनौं ।
बुद्धले ज्ञान पाएको के हो भन्ने सन्दर्भलाई आजको सूचना प्रविधिको विकाससँग सम्बन्धित एक दृष्टान्तमार्फत स्पष्ट पार्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, हामी अहिले हाम्रो मोबाइलमा संसार छ भन्न सक्छौं । अर्थात्, हामी हाम्रो सानो मोबाइलमार्फत संसारका विविधि विषयमा तत्काल जानकारी हासिल गर्न समर्थ छौं । तर, डाटा अन नगरी वा वाईफाई नजोडी संसारको ज्ञान र सूचना हाम्रो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न हामीले सक्छौं त ? अहँ, सक्दैनौं ।
अहिले हामीसँग रहेको मस्तिष्क डाटा वा वाईफाई नजोडिएको मोबाइल जस्तै हो । जसमार्फत फोन गर्न, गेम खेल्न, हिसाब गर्नलगायतका काम गर्न मिल्छ । तर, संसारको अनन्त ज्ञानसँग ‘कनेक्ट’ हुन सकिन्न । ध्यान साधनामार्फत मस्तिष्कमा वाईफाई वा डाटा निर्माण हुँदै जान्छ । जब पूर्ण वाईफाई निर्माण हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मस्तिष्कमा ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण ज्ञानह अवतरित हुन पुग्छन् । त्यही प्रक्रियाको प्राप्तिलाई नै वैशाख पूर्णिमामा बुद्धले ज्ञान पाएको भनिएको हो ।
बुद्धको आर्य अष्टांगिक मार्गअन्तर्गतको सम्यक समाधिलाई अवलम्बन गर्नु नै बुद्धप्रतिको वास्तविक सम्मान अर्पण गर्नु हो। सन् १९८० देखि युरोप अमेरिकाका मनोविद् र अस्पतालहले ‘माइन्ट फुलनेस मेडिटेसन’लाई तीव्र प्रयोगमा ल्याएका छन् । माइन्ट फुलनेस मेडिटेसन’ बुद्धले प्रयोगमा ल्याउनु भएको विपाशना ध्यान विधि नै है । आज सिंगो विश्वले बुद्धको ध्यानविधिलाई उच्च महत्त्वसाथ जीवनमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हामी पनि ध्यानलाई जीवनशैली बनाएर बौद्धमार्गको पथिक बन्न सक्छौं ।